Himalaya Dainik » भर्खरै बिहे गरेकी श्रीमतीको मृत्यु सहन नसकेर एउटै ‘चिता’मा अ’स्ताए श्रीमान !
भर्खरै बिहे गरेकी श्रीमतीको मृत्यु सहन नसकेर एउटै ‘चिता’मा अ’स्ताए श्रीमान !
एउटा दुखद घटना सार्वजनिक भएको छ । श्रीमतीको निध’न ‘सहन’ नसकेर श्रीमानले पनि ज्या’नको ब’लिदान दिएका छन् । उनले सुरूमा श्रीमतीकै चि’तामा चढेर ज्या’न दिने कोशिश गरेका थिए । तर मलामीले बचाए । तरपनि अन्त्यमा उनी कुवामा हो’लिए जहाँ उनको निध’न भयो ।
यो घटना भारतको महाराष्ट्रको चन्द्रपुरमा भएको हो । श्रीमानको नाम किशार हो उनी २५ वर्षका थिए भने उनकी श्रीमती २० वर्षीकी थिइन् ।
उनकी श्रीमती पनि घरवाहिर कै कुवामा हो’लिएकी थिइन् । शाैचालय गएकी श्रीमती धेरैवेरसम्म पनि घर नफर्कीएपछि खोज्न जाँदा उनलाई कुवामा मृ’त फे’ला परेकी थिइन । विवाह भएको केही समय पछि नै ग’र्भवती अवस्थामा उनले यस्तो निर्णय किन गरिन् भन्ने खुलेको छैन ।
भारतिय मिडियका अनुसार रुचिताको अन्ति’म संस्कार गर्ने क्रममा नजिकै बसेर टोलाइरहेका उनका श्रीमान किशोर चि’ता ज’ल्दै गरेको अनवस्थामा अचा’नक दौडिएर चि’ता माथि चढे । म’लामी गएका आफन्त र परिवारका सदस्यले उनलाई चि’तावाट बाहिर निकाले । तर उनी म’लामीवाट छुटेर दौडिएर गएर श्रीमतीको मृ’त्यु भएको कुवामा फा’ल हा’ने। उनको पनि तत्काल नि’धन भयो ।